Raage ceele oo ay ciidamaddu dib ula wareegeen | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Raage ceele oo ay ciidamaddu dib ula wareegeen
Raage ceele oo ay ciidamaddu dib ula wareegeen
Ciidamadda dawladda Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ayaa shaaca ka qaaday inay si rasmi ah ula wareegeen Raage ceele iyo tuulooyin kale oo hoostaga degmada Cadale ee gobolkaasi Sh/dhexe, iyaga oo aan ilaa iyo imminka wax iska caabin xooggan kala kulmin dagaalyahanka xarakada Shabaab ee Soomaaliya.
Sarkaal la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maammulka Sh/dhexe iyo saraakiisha ciidamadda isbaheysigu ay baaritaanno ka wadaan Raage ceele, wuxuuna sidoo kale ka codsaday shacabka inay kala shaqeeyaan soo celinta nabadda iyo ammaanka guud.
Raage ceele oo qiyaastii 63km u jirta degmada Jowhar ayey la wareegisteedu qeyb weyn ka tahay hawlgalka badweynta Hindiya ee ka dhanka ah Al-shabaab.
Dhinaca kale, wararka laga helayo Cadale ayaa sheegaya in goor dhowayd ciidamadda Shabaab iyo taliyeyaashoodu ay isaga baxeen gudaha degmadaasi.
Shabaab ayaa wejihaya duullaankii ugu weynaa abad – ma ahan oo keliya duqeymaha cirka ee Maraykanka, balse AMISOM oo kaabaysa ciidamadda dawladda ayaa dagaal dhinaca dhulka ah ku qaaday magaalooyinka ay maammulaan ururkaasi.
Previous articleBeledweyne oo hawlgal socda dad lagu qabqabtay
Next articleSoomaali loo maxkamaddeynayo fal argagixiso